AutoSEO iyo FullSEO, Waa kuwee Semalt SEO Adeegga Wanaagsan?
Halkaa marka ay marayso, ku dhawaad qof walba ayaa maqlay SEO. Intiina idinka mid ah ayaa aad u yaqaana macnaheeda iyo sida ay u shaqeyso. Madaxaaga, madhici maysid inaad sharaxdid sida ay u xun tahay wadista taraafikada iyo inaad boggaaga ka dhigto darajo. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuugu haynaa qodobka ugu fiican adiga haddaadan aqoon u laheyn SEO-yada. Si tartiib ah halkaan riix oo si dhaqso ah oo xiiso leh u aqri waxa loola jeedo SEOs iyo sida ay uga caawin karaan ganacsigaaga inuu koro.
Laakiin marar badan isla markiiba waxaan weydiiyaa nooca SEO aad jeceshahay AutoSEO ama FullSEO waxaan helaa muuqaalkan. Midka, cunugga, wuxuu siiyaa markaad weydiiso xisaabinta ay fahmi waayaan. Hagaag, ma nihin caruur, waana hubnaa hadaad isku dhejiso, waxaad waxbadan ka baran doontaa SEO. Ugudambeyn, waxaad lahaan laheyd maskaxdaada nooca SEO aad doorbideyso.
Sidaad ogtahay, SEO-yada ayaa ah dariiqooyinka ugu jaban ee lagu garan karo shabakadaada. Iyo sababta oo ah si weyn ayaa loo bartilmaameedsanayaa, dhagaystayaashaada waxay dareemi karaan xiriir deg deg ah markay booqdaan bartaada.
Marka su'aasha malaayiinta doolar ayaa weli ah nooca SEO ah ee ugu fiican FullSEO ama AutoSEO?
Miyaad door bidaysaa FullSEO ama AutoSEO?
Qaar badan oo milkiileyaasha websaydhka ah iyo isticmaaleyaasha internet-ka, ma helaan wax fikrad ah oo tan xitaa loola jeedo. Mana aha wax dad badani ogyihiin inay ogaadaan. Qaar badan oo milkiileyaasha websaydhku waxay aamminsan yihiin oo keliya SEO. Iyagu ma doonayaan inay la caajiso dhammaan faahfaahinta qoto-dheer. Si kastaba ha noqotee, waxaan u aragnaa macluumaadkan mid lama huraan ah, gaar ahaan marka shakhsiyaadka adiga oo kale ah ay isku dayaan inay fahmaan.
Fahamka SEO waa mid aad u faa'iido badan. Qaabkaan, waxaad u heleysa miisaaniyad si sax ah adoo sare u qaadaya fursadahaaga guusha.
Iyada oo kumanaan kumbuyuutar iyo barnaamijyada SEO-ga ah sida Semalt, adduunka suuqgeynta dhijitaalka ah ay noqotay khariidad. Milkiilayaasha websaydhada ayaa hadda lagu qabtay inta u dhexeysa cidda ay dooranayaan ama adeegyada ugu wanaagsan. Macaamiisha SEO way kala jeexan yihiin inta u dhexeysa shaqaaleynta hay'ad SEO ah ama waxay adeegsadaan barnaamijyada SEO / madal ee jira. In kasta oo ay wadaagaan waxyaabo isku mid ah, haddana way kala duwan yihiin.
FullSEOs waxay ku lug leedahay shaqsi ama koox khubaro SEO ah sida kooxdeena halkan Semalt. Khubaradan ayaa maskaxda ku haya oo istaraatiijiyad kala duwan oo bogga iyo bogga ah istiraatiijiyooyinka SEO-ga ah looga isticmaalaa websaydhkaaga.
In kasta oo AutoSEOs ay ku lug leedahay adeegsiga aalado software si loo hirgaliyo istiraatiijiyooyinka SEO-ga goobta. Nasiib darrose, dad badan oo adeegsada websaydhada ayaan aad ugu qanacsaneyn fikradda ah SEO-ga.
Si lagaaga caawiyo go'aaminta midka ugu fiican, waxaan eegi doonnaa labada SEO-yada isla markaana aan qiimeyn ku sameyn doonnaa Faa'iidooyinkooda iyo Qasaarooyinkooda.
FullSEO wali waxay ku lug leedahay dhammaan adeegyada iyo faa'iidooyinka isticmaalka SEO. Waxaad uheli doontaa inaad abuurto taraafikada dabiiciga ah oo aad fiirsato websaydhkaaga oo si dabiici ah loogu meeleeyo. Shaki la'aan tani waa wax kasta oo milkiilaha websaydhku doonayo. Laakiin sidee macquul u tahay taasi? Qaar badan oo milkiileyaasha websaydhada ah ayaa dhayalsiiya qiimaha SEO. Inbadan waxay ka fikiraan mar hadii ay gelinayaan dhowr erey oo muhiim ah, degelkooduna noqdo SEO Optimized. Laakiin taasi maahan. Sababtaas awgeed ayaa dadbadan oo adeegsada internetka ay uga shaki qabaan sida wanaagsan ee SEO u fiican yahay.
Ka tagista FullSEO ee xirfadleyda Semalt waxay noqon kartaa mid ka mid ah go'aamada ugu wanaagsan ee aad u sameyn doontid websaydhkaaga. Xirfadleyaal ahaan, waxaan ku bixineynaa nolosheena sidii aan u sameyn lahayn tan. Xitaa waxaan ku samaynaa hurdadayada, sidaa darteed ma jiro qof sifiican ugu fiicnaanaya waxyaabaha aad u baahan tahay 'FullSEOs'. Waxaanna ku siineynaa waqti dheeri ah oo aad ku horumariso fikradahaas cusub ee cajiibka ah. FullSEOs waa mid xiiso badan oo waqti qaata, laakiin ma aha inaad taas ka walwasho taas. Ka fikir inaad tahay qayb shaqo. Ma jiro shirkad, ganacsi ama shaqsi jasiirad ah. Adoo u wakiishay howlahan oo kale kooxdayada SEO, waxaad naftaada siisaa waqti ku filan. Waqtiga aad ku qaadan karto nasasho iyo koriin halkii aad ka caban lahayd hurdo la’aanta. Ka fiirso luminta haddii dadaalkaaga oo dhan ka dib aadan ku qanacsanayn natiijada ka soo baxda barnaamijkaaga 'FullSEO'.
Si kastaba ha noqotee, halkan waxaa ah qaar ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee u adeegsiga FullSEO bog ahaan iyo bog ka baxsan SEO-ka websaydhkaaga.
Faa'iidooyinka isticmaalka FullSEO
Waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa istiraatiijiyaddaada SEO. Iyadoo la adeegsanayo FullSEO, waxaad qeexeysaa halka ay aadeyso. Waxaad ku wareejin kartaa fikradahaaga, fikradahaaga iyo shaqsiyadaada websaydhkaaga inta aad ka fiicnaaneyso SEO-gaaga. Istaraatiijiyadduna gebi ahaanba adiga ayaa iska leh, taas oo macnaheedu yahay mid gaar ah.
Waxaad caddeyn kartaa in hawsha SEO loo maareeyay sida qorshuhu yahay. Daawashada qorshahaaga in la helo ayaa ma aha hab fiican oo lagu bilaabo degel. Iyada oo la adeegsanayo FullSEO, waxaad heleysaa kormeer boggaaga oo aad saxdo khaladaadka ku jira fulinta qorshahaaga SEO. Sidan, waxaad ku qanacsan tahay natiijada.
Marka loo fiiriyo FullSEOs, waad awoodaa inaad horumariso boggaaga bannaanka. Lahaanshaha bog-ka-baxsan ayaa muhiim u ah wanaajinta taraafikada bartaada. Bogag ka baxsan waa websaydhka ka baxsan boggaaga. Markaad ku qorto barta martida baloog kale ama ka tagto faallo, taasi waxaa loo arkaa inay tahay kor u qaaditaan bogga ka baxsan. FUllSEOs, waxay kuu oggolaaneysaa inaad gacanta ku dhigto xiriidhada aad u adeegsato xiriiriyeyaashaan dambe. Tani waxay u sahlaysaa dadka isticmaala internetku inay la xidhiidhaan faalladaada iyo websaydhkaaga. Faahfaahin ka hadlaysa daryeelka maqaarka, FullSEO ayaa kuu fududaynaysa inaad isku xidho xiriiriyeyaal websaydhkaaga oo ka hadlaya daryeelka maqaarka. Sidan, waxaad akhriskayaasha faallooyinka ugu beddeshaa taraafikada iyo macaamiisha.
Waad ka dooran kartaa meesha boggaagu ku xidhan yahay. FullSEO waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato tayada goobaha iskuxirayaasha iyo tayada waxyaabaha kujira dhabarkaaga. Sidan, waad xakameyneysaa yaa arka waxaadna u soo bandhigeysaa boggaaga qaabkiisa ugufiican.
Ma jiraan wax kaamil ah, oo waxaa jira hoos u dhac xagga isticmaalka loo adeegsado FullSEO
Waqti qaadasho: FullSEOs waxay ubaahantahay waqti iyo dadaal badan qorayaasha. Gaar ahaan marka ay taasi dhacdo qof aan khibrad u lahayn arrimaha gudaha. Shaqaalaysiinta adeegyada hay'adda SEO waxay noqon kartaa hab weyn oo looga hortago tan.
Waxay u baahan tahay koox go'an: waxaad u baahan doontaa koox aad u heersareysa oo aad ka takhalusto fullSEO cajiib ah.
Websaydhada waaweyn, hirgelinta fullSEO waxay qaadan kartaa waqti dheer.
Qarnigii 21aad waxaa la yimid horumar badan oo dhanka teknolojiyadda ah. Dadaalka aadanaha ayaa si weyn hoos loogu dhigay iyadoo la horumarinayo wax soo saarka dhammaanteedna looga mahadcelinayo tikniyoolajiyadda. Iyo dabcan, shakhsiyaadka xiisaha leh ee gacan ka geysan kara abuurista.
AutoSEO waa waji kale oo nolosheena ah halka tikniyoolajiyaddu ay ku siisay caawimaad weyn. SEO otomaatig ah waa adeegsiga softiweerka SEO-ga si buuxda ama otomaatig u ah iyo aalado lagu hirgaliyo istiraatiijiyadaha SEO. Teknolojiyadani waxay xadiday baahida loo qabo dadaal aadamiga.
Halkan waxaa ah qaar ka mid ah faa'iidooyinka AutoSEO
Way ka jaban tahay kan loo yaqaan 'FullSEO'. Way ka jaban tahay kuwa loo yaqaan 'FullSEO'. Sababtoo ah dadaal yar ama bini-aadamnimo ayaa loo baahan yahay, ma jiraan koox SEO ah. Tani waxay yareynaysaa qiimaha dayactirka taas oo u suurta gelineysa soosaarayaasha adeegga AutoSEO inay yareeyaan qiimahooda.
Waxay si fudud wax uga qabataa hawlo adadag: oo aan lahayn karti aad u daallan, maskaxda wax uga dhinto ama aad u caajiso, mashiinadu waxay xajin karaan xawaare aad u xawaare badan oo joogto ah. Tani waxay fududeyneysaa in la maareeyo howlaha sida hanti-dhowrka, hubinta xiriirinta jaban, cufnaanta ereyga, calaamadaha iyo macluumaad kale oo muhiim ah bogagga iyadoo aan loo eegeyn cabbirkeeda.
Way ka fududdahay in la helo macluumaad sax ah oo cusub oo ku saabsan darajada eraygaaga muhiimka ah.
Tikniyoolajiyadani waxay ku siinaysaa awood aad ku falanqeyso tartammadaada dib-u-xirida, cufnaanta ereyga, calaamadaha iyo xogta kale ee faa'iidada leh. Markaa waad ka faa’iidaysan kartaa macluumaadkan, fahmi kartaa si qarsoodi ah oo aad u hagaajin kartaa boggaaga.
AutoSEO waxay kuu oggolaaneysaa inaad jadwal u sameyso howlaha SEO oo si weyn u badbaadiya waqtiga.
Looma baahna in la shaqaaleeyo koox SEO ah oo weyn. Teknolojiyaddu waxay ka dhigi kartaa kombuyuutarrada inay qabtaan shaqada toban qof, tanina waxay ku kaydineysaa qiimaha iibsadaha iyo iibiyaha labadaba. Iyaga oo tirtiraya baahida loo qabo in la shaqaaleysiiyo koox weyn, shirkadaha yaryar iyo bilaabayaashu waxay fursad fiican u helaan ka badbaadista suuqa adag.
Mashiinka xad dhaafka ee bina aadamka ayaa wali loo baahan yahay. Waxaa jira dhowr sababood oo ay aadanuhu wali u maareeyaan howlaha ugu nugul uguna muhiimsan. Si kasta oo ay tahay sida teknolojiyadda casriga ahi u jirto, weli waxaa jirta fursad ay ugu sii xumaato.
Markii aan si habboon loo istcimaalayn, softiweerka SEO wuxuu abuuraa xiriiro xumo. Tani waxay markaa ku ciqaabi kartaa boggaaga.
Intooda badan software-ka SEO wuxuu diirada saarayaa tirada ereyada muhiimka ah ee 'SEO keywords', 'backlinks' iwm. Ma siinayaan taxadar badan tayada. Tani waxay dhibaato ku noqon kartaa mustaqbalka fog.
Inta badan xiriirada lagu sameeyay softiweerka SEO ama aaladaha ayaa dhib ku keenaya taraafikada goobtaada.
Adoo bixinaya labada adeegba, Semalt wuxuu ku siinayaa fursadaha ugu fiican ee aad ku dooran karto xulashada ugu habboon. Shaqsi kasta iyo degel kastaaba waa mid gaar ah, oo waxaad u qalantaa daaweyn gaar ah. Fursad kasta oo aad dareento ayaa ugu fiican, nala soo socodsii, oo waxaan kuu soo bandhigi doonnaa goobta ugu wanaagsan SEO ee aad waligaa aragtay. Kooxdayada cajiibka ah iyo wakiilladayada daryeelka macaamiisha ee had iyo jeer diyaar u ah, waad waydiin kartaa su aalo kasta oo aad qabi karto oo ku dhex mari kara. Waxaan kalsooni badan ku qabnaa annaga oo og inaad hadda fahansan tahay micnaha FullSEO iyo AutoSEO. Aqoontaas, hadda waxaad dooran kartaa inta u dhexeysa adeegyada Semalt FullSEO iyo AutoSEO dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u xaqiijiso inaad dooratid adeegga ku habboon SEO ee websaydhkaaga iyo ganacsigaaga. Hadda waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka aad u malaynayso inuu ugu fiican yahay.